ရှူရှူးလေးက ဘာရောင်လဲ - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ဩဂုတ် 26, 2019 Supparat Upama, M.D.
ရှူရှူးအရောင် ၇ မျိုးက ပြောပြတဲ့ ကျန်းမာရေးအကြောင်း
ရှူရှူး အနီရောင်ရင့်ရင့်ဆိုရင် ပိုးဝင်ခြင်း (သို့) ကျောက်ကပ် / ဆီးလမ်းကြောင်း / ဆီးအိမ် တစ်ခုခုမှာ ကျောက်တည်နေခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ရှူရှူး အညိုရောင်ရင့်ရင့် (ရေနွေးကြမ်းကျကျအရောင် ) ဆိုရင် ဒဏ်ရာကြောင့် ကြွက်သားတစ်သျူးပြဲနေခြင်းမျိုးဖြစ်နိုင်သလို ၊ အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း / တရားမဝင် မူးယစ်ဆေးဝါး တစ်ခုခုသုံးစွဲထားခြင်း စတာတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ရှူးရဲ့ အရောင်အဆင်း အနံ့ အမြှုပ် တို့ကို လေ့လာခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးမှာ တစ်ခုခု ချွတ်ယွင်းချက် ရှိမရှိ သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရှူရှူးအရောင် အပြောင်းအလဲကို သတိထားမိတာနဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ရောဂါကို ထိရောက်စွာ ရှာဖွေကုသပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရှူရှူးကတော့ နေ့တိုင်းပေါက်နေကြတာပါပဲ။ ဘယ်နှယောက်ကများ ကိုယ့်ရှူရှူးကို သေသေချာချာ ဂရုတစိုက် ကြည့်ဖူးပါသလဲ။ အရောင်အပြောင်းအလဲ ကို စစ်ဆေးကြည့်မိကြပါသလဲ။ အရောင်နဲ့ အနံ့ အပြောင်းအလဲ ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အန္တရာယ်တစ်ခုခု၊ အပြောင်းအလဲတစ်ခုခု ဖြစ်နေတာကို အချက်ပေးလိုက်တာပဲ ဆိုတာကို သိထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ရှူရှူးက အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ပါ။ ကိုယ်စားလိုက်တဲ့အစားအစာနဲ့ သောက်သုံးလိုက်တဲ့ အရည်တွေပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ဆိုကြပါစို့ရေများများမသောက်ဘူးဆိုရင် အဝါရောင်ရင့်ရင့်ဖြစ်သွား ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရှူရှူးက အရောင်ရင့်နေပြီ ဆိုရင် အထူးသဖြင့် ပူအိုက်တဲ့ရာသီ နဲ့ အားကစားလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်တွေမှာ ပုံမှန်အရောင် ပြန်ဖြစ်ဖို့ ရေကို များများသောက်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေလိုကြည်နေပြန်ရင်လည်း ရေအသောက်များတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တာရယ် ၊ ကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ ရှူရှူးထဲပါသွားတာတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကောင်းဆုံးက ရေကို သင့်တင့်မျှတစွာသောက်သုံးပြီး သွားလိုက်တဲ့ဆီးတွေကို ဂရုတစိုက် စောင့်ကြည့်ပေးဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
အနီရောင်ရှိတဲ့အစားအစာတွေကို စားမိတဲ့အခါ ဥပမာ – ချဉ်ပေါင်သီးဖျော်ရည်တို့ နိုကိုဥ ဖျော်ရည်တို့ သောက်မိတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ ရှူရှူးအရောင်တွေဟာ နီနေတတ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း သွေးယိုစိမ့်မှုကြောင့်လည်း ဖြစ်နေတဲ့ ရောဂါအလိုက် ဆီးမှာ အနီရောင် အနည်းနဲ့အများ ပါဝင်နေတတ်ပါတယ်။ ဆီးထဲသွေးပါတယ်ဆိုတာ ကျောက်ကပ် ပိုးဝင်ခြင်း၊ ဆီးပြွန်နဲ့ ဆီးအိမ်မှာ ကျောက်တည်နေခြင်း၊ သက်ကြီးပိုင်း နဲ့ ဆေးလိပ်အသောက်များတဲ့ သက်ငယ်ပိုင်း တွေ မှာ အဖြစ်များတဲ့ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၊ ဆီးအိ်မ်ကင်ဆာ စတာတွေ ဖြစ်နေတဲ့သူတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ ကင်ဆာတွေဟာ နာကျင်မှုဝေဒနာတွေ ဖြစ်ပေါ်လေ့မရှိဘဲ ဆီးထဲမှာသာ သွေး ပါ နေတတ်တာမို့လို့ ဒီရောဂါတွေ တော့ ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ လက္ခဏာကို အချက်ပြနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကင်ဆာမဟုတ်ဘဲ ဆီးကြိတ်ကြီးနေတဲ့ အမျိုးသားများမှာလည်း သွေးပါတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဆီးထဲ သွေးပါနေရင်၊ ဒါမှမဟုတ် သွေးတွေအများကြီးပါလို့ ဆီးအရောင် အနီပုပ်ပုပ် ဖြစ်နေပြီဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး ရောဂါရဲ့ ဇစ်မြစ်ကို ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။
၃. ရှူရှူး ခရမ်းရောင်
ခရမ်းရောင်ရှူရှူးကတော့ ရှားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆီးပိုက်တတ်ထားရတဲ့ သက်ကြီးပိုင်းလူနာများမှာ ဒါမျိုး ကြုံတွေ့ နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ပလက်စတစ်ဆီးပိုက်နဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းဘက်တီးရီးယားပိုး တို့ဓါတ်ပြုတဲ့အခါမှာ ဒီလို အရောင်မျိုး ပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးများသုံးစွဲထားခြင်း၊ အရက်အလွန်အကြုံသောက်ထားခြင်း (သို့) ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့် ကြွက်သားတစ်ရှူးတွေ ပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာ အညိုရောင် (ရေနွေးကြမ်းကျကျအရောင် မျိုး) ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘီလီရူဘင်ပမာဏများ အလွန်အမင်းမြင့်တက်နေလို့ အသည်းက စစ်ထုတ်ရတာများပြီး အသည်းရောင်ရမ်းခြင်း နဲ့လည်းဆက်စပ်နေပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ရှူးရှူးပေါက်လိုက်လို့ လက်ဖက်ရည်အရောင်တွေ ထွက်လာတာ တွေ့ရပြီဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ချက်ချင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု ခံယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တိမ်လိုဖြူနေတဲ့ နို့နှစ်ရောင်ရှူရှူးတွေ ထွက်နေရင်တော့ ဆီးထဲမှာ ပြည်တွေ ပါနေပြီလို့ သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးလမ်းကြောင်းထဲမှာ ပြန်ရည်ကြောထဲကအရည်တွေပါနေတာကြောင့်အပြင် ဆီးပိုက်ကို အချိန်ရှည်ကြာစွာ တပ်ထားရခြင်းတို့ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဗီတာမင်ဆေးတွေ (သို့) တစ်ချို့ ပဋိဇီ၀ဆေးတွေသောက်ထားရင် ရှူရှူးလိမ္မော်ရောင်တွေ သွားတတ်ပါတယ်။
၇. အပြာရောင် / အစိမ်းရောင်
ပိုးဝင်လို့ ဖြစ်တဲ့ နာကျင်မှုမျိုးမှ သက်သာစေရန် နှင့် ဆီးအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်းအတွက် သောက်ရတဲ့ ဆေးတွေကြောင့် ရှူရှူး စိမ်းစိမ်းပြာပြာတွေ ပေါက်တတ်ပါတယ်။ မေ့ဆေးသုံးထားရင်လည်း အလားတူ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကညွှတ်တွေစားတာများရင်လည်း အစိမ်းဖျော့ဖျော့ ရှူရှူးများသွားတတ်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်ပြောရရင် ရှူရှူးအရောင်၊ ကြည်လင်မှု၊ အမြှုပ်ထမှုတွေနဲ့ အနံ့ က ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာ ကို ညွှန်ပြနေတာမို့လို့ အလွန် အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် “ရှူရှူးလေးက ဘာရောင်လဲ” ဆိုတာကို အမြဲ စစ်ဆေးပြီး အရောင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို တွေ့ရင် ဒီအတိုင်းမနေပါနဲ့။ တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး ရောဂါကို ရှာဖွေပါ။ ကိုယ့်မှာဖြစ်နေတဲ့ရောဂါဟာ အန္တရာယ်အဆင့်မရောင်ခင် စောစောသိတော့ ထိထိရောက်ရောက် ကုနိုင်တာပေါ့။
ရှူရှူးလေးက ဘာရောင်လဲ ရှူရှူးကတော့ နေ့တိုင်းပေါက်နေကြတာပါပဲ။ ဘယ်နှယောက်ကများ ကိုယ့်ရှူရှူးကို သေသေချာချာ ဂရုတစိုက် ကြည့်ဖူးပါသလဲ။
The Second Class Honors, M.D., Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, 2002. , 2010